Nchịkwa Science Science na India | Gịnị kpatara sayensị data? "Ọ bụ ya
Kedu ihe bụ Data Science Course?
Nkọwapụta mgbe ị na-ebu usoro Science Science
Sayensị data na India
Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ ntụziaka iji mụta:
Ebee ka imuta ihe:
Science sayensị bụ ụgbọ okporo ígwè nke na-agụnye usoro ezi uche na usoro iji wepụ ihe ọmụma bara uru site na ozi. Enwere ike ịhazi ozi a nke a wepụtara. E nwere ihe ọmụmụ dịgasị iche nke na-aga n'okpuru Data Science. Nye anyị ohere ịchọta ụzọ ị ga - esi họrọ usoro ị ga - eji mee ihe.
Mara ahụmahụ gị: A ghaghị ịtụle ntọala nkuzi gị tupu ị họrọ usoro ihe omume. Enweghị nkuzi na ikike dị mkpa n'ubi ahụ, a gaghị anabata gị na nke ọ bụla n'ime ihe ọmụmụ ahụ. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke òtù dị iche iche na-edepụta ihe dị mkpa nke isonyere Usoro Mmụta Sayensị Data Science. Mepee saịtị nke nkewa iji chọpụta ma ahụmahụ gị ọ na-ahazi ihe ndị dị mkpa.
Ghọta ebumnuche gị: Tupu ị họrọ usoro, nwee nghọta zuru oke nke ebumnuche gị ma ọ bụ na ọ ga-abụ na ị chọrọ ịmụta. Ọkachamara sayensị nwere ọtụtụ ntinye uche na ịchọrọ ịhọrọ ihe ị na-achọ. Ihe omume ịchọrọ isonye ga enyere gị aka ịghọta ihe ị chọrọ ime. Ọ dịghị onye ma nke a nwere ike ime ka ị nweta nzọụkwụ nke ihe ịga nke ọma na mpaghara gị.
I nwere nhọrọ abụọ nke esi amụta. Otu bụ nkewa ịmara ebe ị ga - akwụ ụgwọ ego obere ma onye nke ọzọ na - esonye na kọleji dị mma nke ọma. N'inwe ihe mmụta onwe onye, ​​ịchọrọ ịmịnye mmụọ dị elu iji gwụchaa akwụkwọ ahụ mgbe kọleji nwere ndị ọkachamara na-eduzi gị. Ị nwere ike ịhọrọ dịka egosipụtara na ọkwa gị.
Ma ị na-emepụta ntinye akwụkwọ weebụ ma ọ bụ ịbanye na mahadum, ịtụkọta usoro ziri ezi dị oke mkpa maka mmepe. Ị nwere ike ịchọta mmetụta sitere n'aka ndị enyi gị bụ ndị nabatara akwụkwọ ahụ. Na ohere na ị na-esonye n'usoro nkịtị, buru ụzọ họrọ ebe ebe kwesịrị ịdị. Ọ bụrụ na ị bụghị kpọmkwem banyere usoro sayensị ọ bụla nke sayensị na India, ị nwere ike ịchọta otu n'ime kọleji kacha mma na mpụga mba ahụ. Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ na-enye Ọzụzụ Ụlọọrụ na ọzụzụ ọ bụla na Gurgaon, Delhi, Banglore, Noida, India na mba ndị ọzọ dịka USA, UK na Australia.
A na-atụle nwoke na-achọ ịme ihe ọ bụla gbasara ọtụtụ ihe. Ntụle ahụ dị n'elu na-enyere gị aka ịhọrọ akaebe sayensị ọmụma ị ruru eru maka.